Hoggaamiyayaasha Soomaaliya iyo Kenya oo ku kulmay Nairobi - Sabahionline.com
Hoggaamiyayaasha Soomaaliya iyo Kenya oo ku kulmay Nairobi
Juunyo 14, 2012
Ra’iisul-wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Maxamed Cali ayaa Kenya uga mahadceliyay Arbacadii (13-kii June) doorkeeda ku aaddan sidii Soomaaliya loogu soo celin lahaa nabaddii, sidaana waxa sheegtay Capital FM-ta Kenya.
Kibaki iyo Ban oo arrinta Soomaaliya uga wada hadlay shirweynihii Midowga Afrika
Raysal Wasaaraha Soomaaliya oo soo gebaggabeeyey booqashadiisii Jibuuti iyo Kenya.
Kenya iyo Itoobiya oo ammaanay hawlgallada ammaan ee ka socda Soomaaliya
Kibaki oo dalbaday mucaawimo dib loogu celiyo qaxootiga
Cali ayaa mar uu kulan la lahaa Madaxweynaha Kenya Mwai Kibaki, waxa uu uga xog-warramay Qorshaha Nabadda isaga oo sheegay in uu rumaysanyahay in ay Soomaaliya cagta saartay waddadii xasilloonida. Ra’iisul-wasaaraha waxa kale oo uu ammaanay kana mahadnaqay sida ciidamada Kenya ee ku sugan Soomaaliya loo hoos geeyay taliska AMISOM.
Kibaki waxa uu sheegay in ay jirto baahi loo qabo xoojinta hay’adaha dawladda ee Soomaaliya, sida ciidanka, bilayska iyo garsoorka.
Kibaki iyo Cali ayaa sidoo kale ka wada hadlay qaxootiga Soomaaliyeed ee ku sugan Kenya, iyada oo hoggaamiyaha Kenya uu ku booriyay Cali in uu u soo dumo taageerada caalamka sidii qaxootiga loogu celin lahaa gobollada ammaankooda la sugay ee Soomaaliya.
“Waxannu rumaysannahay in meesha ugu fiican ee qaxootiga Soomaaliyeed dantu ugu jirto ay tahay dalkooda oo ay ku noqdaan gobollada dhawaan la xoreeyay,” ayuu yiri Kibaki.